Riu Hotels iji mee ka Matapalo Beach dị na Costa Rica dị nchebe ma dị ọcha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Riu Hotels iji mee ka Matapalo Beach dị na Costa Rica dị nchebe ma dị ọcha
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Costa Rica • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ilọ nkwari akụ RIU na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ntinye aka na mmelite na ndozi ọma nke ebe ebe ọ na-arụ ọrụ.
Ilọ nkwari akụ RIU na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ntinye aka na mmelite na nlekọta nke ọma ebe ọ na-arụ ọrụ. N'oge a, RIU esoro ndị ọchịchị Carrillo rụkọọ ọrụ, na mpaghara Guanacaste nke Costa Rican. Iji chebe osimiri nke Matapalo, E wuru usoro nke na-egbochi njem nke ugbo ala na quads, nke bụ ihe ize ndụ nye ndị na-asa ahụ na ndị ọbịa.
Otu n’ime ọrụ ndị gbara ọkpụrụkpụ bụ ịrụ àkwà mmiri iji mee ka ụgbọala ndị ahụ rute n’ebe a na-agafe agafe n’oge ọ bụla n’afọ. Ọ bụrụhaala na ọ ga-ekwe omume, akwa ahụ ga-arụ ọrụ dị ka usoro nsị mmiri n'oge udu mmiri. Na mgbakwunye, RIU enyela nnukwu bench na ite okooko osisi nke na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi iji gbochie ịnweta mpaghara ọha mmadụ pere mpe.
Onye isi obodo nke Carrillo, Carlos Cantillo, kwuru na "yana ịchọ mma na imeziwanye ohere ịbanye n'ụsọ osimiri, ọrụ ndị a na-ekwe nkwa nchekwa dị elu maka ndị ọbịa". E wezụga nke ahụ, o mere ka ọ pụta ìhè na "ọ na-egbochi ntinye nke ugbo ala nwere ike ibute ihe ọghọm".
Agbanyeghị na amachibidoro ịnweta ụzọ ụgbọ ala ndị ọzọ, ọrụ a na-ekwe nkwa ịnweta ọha na njikwa maka ndị nọ na ọrụ mberede. Ọzọkwa, a na-ahapụ skis ma ọ bụ ụgbọ mmiri abanye n'ime oké osimiri maka ọrụ ndị achọrọ.
RIU mepere Riu Guanacaste, ụlọ nkwari akụ mbụ ya na Costa Rica na 2009, na Riu Palace Costa Rica na-esote na 2012. Kemgbe ọ malitere ọrụ ya, ụlọ ọrụ ahụ etinyela aka na njedebe na mmepe ya. Ogige RIU dị na Playa Matapalo, na mpaghara nke mara mma mara mma. Ya mere, ụlọ nkwari akụ ahụ kpebiri itinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 200 nke hectare 250 nke ihe onwunwe ya iji chebe gburugburu ebe obibi obodo site na ịmepụta RIU Wildlife Refuge. Nke a bụ mpaghara nke mejupụtara akụkụ nke Chorotega Biological Corridor, yabụ ichebe ahịhịa na osisi ya bụ nke ọdịmma nchekwa mba.